लाखौं डलरको भ्रष्टाचार मुद्दामा मलेसियाली पूर्वप्रधानमन्त्री दोषी ठहर, १२ वर्षको कैद सजाय- विश्व - कान्तिपुर समाचार
लाखौं डलरको भ्रष्टाचार मुद्दामा मलेसियाली पूर्वप्रधानमन्त्री दोषी ठहर, १२ वर्षको कैद सजाय
नाजिब रजाकलाई लाखौं डलर भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो
श्रावण १३, २०७७ एएफपी
एएफपी — मलेसियाको एक अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई लाखौं डलरको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १२ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये पहिलोको निर्णय सुनाउँदै अदालतले उनीविरुद्ध लागेका सातवटै अभियोगमा नाजिब दोषी भएको ठहरसमेत गरेको छ । आफूमाथि लागाइएका आपराधिक प्रयोजनका लागि विश्वासघात गरेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोगजस्ता अभियोगहरू नाजिबले अस्वीकार गरेका थिए ।
नाजिबविरुद्धको मुद्दालाई मलेसियाको कानुनी शासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासको महत्वपूर्ण परीक्षा मानिएको थियो । मलेसियाको ‘१ एमडीबी’ नामक सरकारी कोषमा भएको अपचलन काण्डले विश्वभरका जालसाजी र भ्रष्टाचारलाई उजागर गरिदिएको छ ।
पछिल्लो फैसलाले मलेसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ । सन् २००९ देखि २०१८ सम्म प्रधानमन्त्री भएका नाजिब मलेसियाको मुख्य दल यूएमएनओको पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । उक्त दलले मलेसियाको स्वतन्त्रतापछि करिब ६१ वर्ष शासन गरिसकेको छ ।
मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित उच्च अदातलका न्यायाधीश मोहमद नज्लान मोहमद गजलीले सबै प्रमाणका आधारमा अभियोजन पुष्टि भएको जनाएका हुन् । अदालतको फैसलापछि संवाददाताहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नाजिबले आफू असन्तुष्ट भएको बताए । ‘यो निश्चय नै अन्त्य भने होइन् । हामीसंग पुनराबलोकनको विकल्प छ । त्यसमा सफल हुनेमा हामी पुर्ण आशावादी छौं,’ उनले भने ।
के थियो आरोप ?
सरकारी कोषबाट तात्कालीक प्रधानमन्त्रीका निजी खातामा ४ करोड २० लाख मलेसियाली रिङगीट (१ करोड अमेरिकी डलर) गैरकानुनी रुपमा सारिएको विषयसग सम्बन्धित मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाइएको हो । नाजिबले भने आफूले गल्ती नगरेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक सल्लाहकारहरूले आफूलाई झुक्याएको उनको दाबी छ । नाजिबका अनुसार फरार भएका झो लोले उनलाई भ्रममा पारेका थिए ।
झो लोविरुद्ध अमेरिका र मलेसियामा मुद्दा चलाइएको छ । तर उनले आफू निर्दोष भएको बताउँछन् । नाजिबका वकिलहरूले उनको खातामा आएको रकम सरकारी कोषबाट नभई साउदी राजपरिवारले चन्दाका रुपमा दिएको तर्क गरेका थिए ।
नाजिबलाई प्रत्येक अभियोगका लागि १५ देखि २० वर्ष कारागार सजाय हुनसक्ने जनाइएको छ । यसअघि उनले आफ्नो विपक्षमा फैसला आए पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए ।
‘१ एमडीबी’ काण्ड के हो ?
नाजिबविरुद्धको मुद्दा सन् २००९ मा उनी आफैंले स्थापना गरेको ‘१ एमडीबी’ कोषसँग सम्बन्धित हो । क्वालालम्पुरलाई एउटा आर्थिक केन्द्र बनाउने तथा रणनीतिक लगानीमार्फत् अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने योजनाअनुसार नाजिबको कार्यकालमा उक्त कोष स्थापना भएको थियो । तर सन् २०१५ को सुरुतिर विभिन्न बैंक तथा बन्डमा लगानी गरेकालाई तिर्नुपर्ने ११ अर्ब डलर नदिएपछि उक्त परियोजनाबारे मानिसहरुमा प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यति बेला नै वाल स्ट्रीट जर्नलले सो कोषबाट ७० करोड डलर रजाकका निजी बैंक खाताहरूमा सारिएको कागजपत्र आफूले फेला पारेको भनेर समाचार प्रकाशित गरेको थियो । अमेरिकी तथा मलेसियाली अधिकारीले ४ अर्ब ५० करोड डलर गैरकानुनी रुपमा चोरी गरिएको आरोप लगाएका थिए ।
कोषमा करोडौं डलरको हरहिसाब नभएको बताइएको छ । उक्त रकम विलासिताका सामान, घरजग्गा, व्यक्तिगत जहाज तथा हलिउडको चलचित्रसँग सम्बन्धित भएको जनाइएको छ । तर रजाकले कुनै पनि सार्वजनिक कोषबाट आफूले पैसा नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नाजिबलाई दुई वर्षअघिको निर्वाचनपछि देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । पछि जुलाई महिनामा उनलाई पक्राउ गरियो । त्यसअघि नाजिब र उनकी पत्नी रोज्मा मान्सरसग सम्बन्धित विभिन्न स्थानहरूमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । त्यस क्रममा २७ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरका बिलासिताका सामाग्री, गरगहना र नगद बरामद गरेको थियो ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ २०:४१
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा उपाध्यक्ष गौतमबीच भेट
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच मंगलबार साँझ भेटवार्ता भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद चर्किएका बेला ओली र गौतमबीच भेट भएको हो । तर गौतमको सचिवालयले दुई नेताबीचको भेट राजनीतिक उद्देश्यले नभएको दाबी गरेको छ ।
'प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित निवासमा विल्कुल पारिवारिक भेटघाटका क्रममा पुग्नुभएको हो । उक्त भेटमा दुबै तर्फबाट जम्मा ३० जनाको उपस्थिति थियोे' उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस संयोजक विश्‍वमणि सुवेदीले भने, 'यसबाहेक उक्त भेटघाटको कुनै राजनीतिक अर्थ र अभिप्राय थिएन । केही समसामयिक विषयमा अनौपचारिक कुरा भए पनि भेटको उद्देश राजनीतिक होइन ।'
ओली मंगलबार साँझ ७ बजे महासचिव विष्णु पौडेलसहित गौतम निवास पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न उनको निवास भैँसेपाटी पुगेका छन् । मंगलबार साँझ ७ बजे महासचिव विष्णु पौडेलसहित प्रधानमन्त्री ओली गौतम निवास पुगेको गौतमका सहयोगीले बताए ।
गौतमले मंगलबारमात्रै विवाद समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदै प्रस्ताव दुई अध्यक्षलाई बुझाएका थिए । गौतमले पार्टीमा विग्रह आउन नदिन ओलीलाई एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभर प्रधानमन्त्री बनाउनेसहित को ६ बुँदे प्रस्ताव बुझाएका थिए ।
पार्टी एकता बचाउन आफूले प्रस्ताव ल्याएको गौतमको दावी छ । गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याए पनि मंगलबार अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बहुमत स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागि भएर ओलीको आलोचना गरेका थिए । त्यसलगत्तै गौतमलाई फकाउन प्रधानमन्त्री उनको निवास पुगेको स्रोतले बतायो । ओलीको साथमा पत्नी राधिका शाक्य पनि गौतम निवास पुगेकी छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७७ २०:२१